१ हजार करोड़ कमाएर पनि यसकारण घाटामा छ बाहुबली २ | Jukson
१ हजार करोड़ कमाएर पनि यसकारण घाटामा छ बाहुबली २
पोखरा, २६ वैशाख
बाहुबली रिलीज भएको ११ दिन भइसकेको छ र कमाईको हरेक रेकर्ड यो फिल्मले तोडिसकेको छ । आशा गरिएको थियो फिल्मले शानदार कमाई गर्नेछ र भयो पनि त्यस्तै । फिल्मले अहिलेसम्म १ हजार करोडको कमाई गरिसकेको छ । तर त्यसको बाबजुत फिल्म घाटामा छ । बाहुबलीको घाटाको पछाडी पनि त्यहि कारण हो जुन आजकाल अन्य हरेक फिल्मीहरुको हो – पाइरेसी ) ।
इन्डियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्टको अनुसार तमिल फिल्म प्रोड्युसर काउन्सिलले नयाँ प्रेजिडेण्ट र कलाकार विशालले एक पायरेसी वेबसाइटको विरुद्ध बाहुबलीको दोस्रो साईटमा अपलोड गर्नेको उजुरी दर्ता गरिएको छ । फिल्म प्रोड्युसर्सको एक प्रतिनिधि मण्डलले यस्तो ईन्टरनेटलाई बन्द गर्ने कुरा उठाइएको छ । त्यो सदस्यको भनाई छ कि पायरेसी चल्दा बाहुबलीको निर्मातालाई खास घाटा उठाउन पर्ने गर्छ ।
‘डायरी’को अर्को गीत सार्वजनिक
कारखानाको ट्रेलर सार्वजनिक
अशोक दर्जी सांगीतिक प्रस्तुतिका लागि मलेसिया जाँदै
फेसबुकमा हिट भएको तस्वीर कसको होला ? यस्तो छ वास्तविकता
लाभांश सुचना ढिला दिए पछि रोकियो हायात होटलको कारोबार
कसरी सुरु भयो 'तिहार' पर्ब ? र किन मनाईन्छ ?